September 21, 2021 - Babal Khabar
Sep212021 by बबाल खबरNo Comments
हरेक मान्छे आफ्नो घरमा सुख-सम्बृद्धि चाहन्छन् र त्यसका लागि फरक फरक जतन पनि गर्छन्। मान्छे जति समस्यामा र हारेको, थाकेको होस् जे भएपनि उनीहरु घर फर्कन चाहन्छन्। तर कहिले-काहिँ पुजापाठ देखि वास्तुको अनुसार घर बनाए पनि लक्ष्मी रिसाउछ्न। यसको जिम्मेदार तपाईको घरको आसपासको चिज हुन सक्छ । घरमा सुख-शान्ति एवम रो गको वास हुनु वास्तु दोष पनि हुन सक्छ। यो दोषको कारण घरका सदस्य बिरामी हुन सक्छ, त्यसैले उनीहरुले उन्नति गर्न सक्दैनन् । यो दोषमा घरको मूख्यद्वार पनि हुन सक्छ। घरको अगाडी यी कुरा भएमा हुन्छ अशुभ: – घरको अगाडी फोहोर पानी जम्मा भएको छ भने तुरुन्तै हटाउनु पर्छ। नभए यसले बिरामी हुने र धनको नोक्सान हुने जस्ता समस्या आउन सक्छ। – घर मूख्यद्वारको अगाडी बिजुलीको खम्बा छ भने यसले तपाइमाथि बाधा अड्चन आउन सक्छ। – घरको अगाडी काँडा भएको बोट छ भने त्यसलाई छिट्टै काट्नुपर्छ। नभए शत्रु
‘भष्मे डन’ भनेपछि धेरैको स्मृतिमा एउटा अनुहार आउँछ, चिन्डे टाउको भएका एक अधवैंशे । बागमति किनारलाई आफ्नो साम्राज्य बनाएर बस्ने उनी मूर्ख तर जब्बर छन् । तर, भष्मे डनको भूमिका निर्वाह गर्ने विपिन कार्की फरक छन् । कति फरक ? संभवत यसको जवाफ रेश्मा कटुवालले दिन सक्छिन् । विपिनसँग सबैभन्दा नजिक रहने उनै रेश्मा हुन् । विपिनकी जीवनसंगी । विपिनले हरेक चलचित्रमा भिन्न भिन्नै चरित्र निर्वाह गरेका छन् । ‘हरि’मा उनी सात्विक अविवाहित अधवैंशेको भूमिकामा छन् । यस्तै, ‘जात्रा’मा उनी एक इमान्दार तर निरिह श्रीमान्को भूमिकामा छन् । चलचित्र ‘प्रसाद’मा पनि उनी इमान्दर तर निरिह श्रीमानकै रुपमा देखिन्छन् । वास्तविकतामा चाहि उनी कस्ता श्रीमान् हुन् ? विपिनले जतिबेला रेश्मालाई जीवनसंगीको रुपमा आफ्नो घरमा भित्र्याए, ठिक त्यहीबेला चलचित्र ‘पशुपतिप्रसाद’मा उनले काम गरे । यहि चलचित्रबाट नै विपिनले ‘भष्मे
बलिउडकी सुन्दर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनको सुन्दरताले धेरैलाई लोभ्याउँछ । ऐश्वर्याको सुन्दरताले मानिसलाई मोहित मात्र बनाउँदैन उनको सुन्दरतालाई देखेर धेरैजना अचम्मित पनि पर्ने गरेका छन् । उनी एक छोरीकी आमा पनि हुन् । उमेरले ४७ वर्ष टेकेकी ऐश्वर्या जिम पनि जाँदिनन् । तर, उनी कसरी यति फिट रहिन् ? ऐश्वर्या फिट रहनका लागि नियमित रुपमा योगा गर्ने गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा उल्लेख छ । उनी डाइट चार्ट पनि नियमित रुपमा फलो गर्छिन् । ऐश्वर्या रायको फिटको राज ऐश्वर्या राय जगिन र ब्रिस्क वाक गर्ने गर्छिन् । उनी नियमित रुपमा हिँड्ने गर्छिन् । उनी ४५ मिनेट योगासन गर्ने गर्छिन् । तौल नियन्त्रण भएन भने उनी कहिलेकाँही जिम जान्छिन् । उनी घरमा नै कार्डियो एक्सरसाइज गर्ने गर्छिन् । उनी पावर योगासन गर्न मन पराउँछिन् । ऐश्वर्याको डाइट रुटिन फिट रहनका लागि ऐश्वर्या दिनको सुरुवात मनतातो पा
भीष्म पितामह एक पौराणिक पात्र हुन् । कथा अनुसार उनी राजा शान्तनु र गगांका सन्तान थिए । महाभारतमा उनको विशेष चर्चा गरिएको छ । भीष्म पितामह महान् योद्धा थिए । उत्तम नेतृत्वकर्ता थिए । के भनिन्छ भने, भीष्म पितामहलाई आफ्नो इच्छा अनुसार मृत्युवरण गर्न सक्ने वरदान मिलेको थियो । यो वरदान उनलाई पिता शान्तनुबाट मिलेको थियो । उनलाई महाभारतमा श्रेष्ठ, ज्ञानी, पराक्रमी, असल–खराब छुट्याउन सक्ने पात्रको रुपमा चित्रित गरिएको छ । भीष्म पितामहले जीवन र जगतका बारेमा थुप्रै उपयोगी कुरा बताएका थिए । उनले कसरी दीर्घजीवन प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको रहस्य पनि खोलेका थिए । जीवन परित्याग नगरौं एता बुद्धिं समांस्थय जीवितत्यं सदा भवेत् जीवन् पुण्यमवाप्नोति पुरुषो भद्रमश्नुते ।। भीष्म पितामहले उक्त श्लोकको माध्यामबाट भनेका छन् कि पुण्य संचय गर्नु जरुरी छ । यद्यपि जो व्यक्ति जीवित रहन्छन्, उनीहरुले नै
पुरा पढनुअघि माथि follow गर्दिनुहोला । भगवान शिवलाई भोलेनाथ पनि भनिएको छ। तर शिव आफ्नो भक्तसँग जति सजिलै प्रसन्न हुनुहुन्छ यहाँको क्रो ध पनि उत्तिकै विना शकारी छ। भनिन्छ कि शिवले तेस्रो आँखा खोलेको दिन संसारको अ न्त निश्चित छ। शिव पुराणमा १२ कार्यहरू, आचरण र सोचाइ द्वारा गरिने पा’पको वर्णन गरिएको छ, जुन पा’पलाई भगवान शिवले कहिल्यै क्ष’मा गर्नुहुन्न। व्यक्ति कहिले पनि सुखी जीवन बिताउन सक्दैन। के-के हुन् त त्यस्ता पा’प जसलाई भगवान शिवले कहिल्यै पनि क्ष’मा गर्नु हुँदैन ? जान्नुहोस्‘ १.अरूको श्रीमान वा श्री’मती माथि नराम्रो नजर राख्नु, वा उनीहरुलाई प्राप्त गर्ने चाहना राख्नु पनि पा’पको श्रेणीमा पर्छ।२.अरुको धनलाई आफ्नो बनाउने चाहना राख्नु पनि शिव जीको नजरमा एउटा अक्षम्य अ’पराध वा पा’प हो। ३.कुनै नि’र्दोष व्यक्तिलाई यात ना दिने, हा’नि पुर्याउने, लु’ट्ने, उसको लागि बा’धा उत्पन्न
पढनुअघि माथि follow अवश्य ग काठमाडौ l आजदेखि सोह्र श्राद्ध सुरु भएको छ। भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि औँशीसम्म अर्थात् १६ दिन तिथिअनुसार श्राद्ध गरिने भएकाले यसलाई सोह्र श्राद्ध भनिएको हो। सोह्र श्राद्धमा पितृहरूको उद्दारका लागि घर वा तीर्थस्थलमा श्राद्ध कर्म गरी पितृहरुको सम्झना गर्ने धार्मिक प्रचलन रहेको छ । जोतिषशास्त्रमा प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृ पक्ष मानिएको छ । पितृहरूका लागि वर्षको दुई पटक श्राद्ध अर्थात् पिण्डदान गरिन्छ । यस अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष पितृ पक्षमा पर्ने तिथिका दिनमा तीन पुस्तासम्मका पितृ, मावलीतर्फ र फूपुहरूलाई समेत गरिने श्राद्धलाई महालय भनिन्छ भने एउटा मात्र पितृका लागि गरिने श्राद्धलाई एकोतिष्ट श्राद्ध भनिन्छ । पर्व तिथिका अवसरमा गरिने श्राद्ध भएकाले यसलाई पारवन वा महालय श्राद्ध पनि भनिन्छ ।पितृहरू दिवंगत भएको वार्षिक तिथिमा अझ औँशीको
अाजको सुनको मुल्य अघि बिनिमय दर हेर्नुस, यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनियमदर तोक्दै अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आजका लागि अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ११८.२८ र खरिद मूल्य ११७.६८ रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि, हिजो एक अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ११७.८७ रुपैयाँ थियो । यस्तै, आज एक यूरोको बिक्री दर १३८.५१ र खरिद दर १३७.८१ तथा पाउण्डको बिक्री मूल्य १६१.९३ रुपैयाँ कायम हुँदा खरिद दर १६१.१० डलर तोकिएको छ । यसका साथै, अष्ट्रेलियन डलरको बिक्री दर ८५.६२ र खरिद दर ८५.१८ रुपैयाँ तोकिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । एसियन मुलुकतर्फ सिंगापुर डलरको बिक्री ८७.४८ र खरिद ८७.०४ रुपैयाँ, १० जापानी येनको बिक्री १०.८० र खरिद १०.७४ तथा चिनियाँ युवानको बिक्री १८.२९ मा हुँदा खरिद १८.२० रुपैयाँमा भइरहेको छ । यता साउदी रियालको बिक्री दर ३१.५४ र खरिद दर
पढनुअघि माथि follow गर्दिनुहोला, मानिसको जन्मेको समय र उसको वातावरणले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ ।त्यसैले कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको जीवन कस्तो हुन्छ ? जान्नुहोस् आफ्नो जन्मबार अनुसार स्वभाव र भाग्य :- आइतबार:आइतबार जन्मेका व्यक्ति सकारात्मक सोचका मालिक हुन्छन् र निकै विश्वसनीय हुन्छन् ।तपाईंहरु अन्र्तमुखी हुने भएका कारण थोरै साथीहरु हुन्छन् ।निकै संवेदनशील हुने भएका कारण तपाईंहरु कसैले भनेको कुरालाई धेरै दिनसम्म मनमा लिइ रहनु हुन्छ । तपाईंहरुमा चिन्तन शक्ति निकै धेरै हुने भएका कारण लेखन अथवा वकालतको क्षेत्रमा हुनुहुनेछ ।तपाईंहरु अरुलाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर त हुनुहुन्छ नै तर तपाईंको चाँडै रिसाउने बानीले तपाईंले सहयोग गर्ने व्यक्तिहरु तपाईंसँग रिसाउने गर्दछन्। तपाईं पैसावाल हुनुहुन्छ र आफ्नो बलबुँतामा नै पैसा कमाउने कोसिस गर्नुहुन्छ ।तपाईं कनै पन
झापा बस्ने डोमा विश्वकर्मा सुवेदीका श्रीमानले आफ्नै छोरी लिएर फ रार भएका थिए । श्रीमानले छोरी लिएर हिडेपछी डोमाले भाडामा बस्ने घरको भाडापनि २ वर्षदेखि तिर्न नसकेको र नानीहरुको स्कुलको शुल्कपनी तिर्न नसकेको गु नासो पोखिन् । श्रीमान् आफ्नै जेठी छोरीसंग लु केर बसेको हुँदा आफुलाई गाउँमा मुख देखाउनै गा ह्रो भएको बताइन् ।आफ्नी छोरी र श्रीमानलाई जहाँ देखेपनी सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै उनी निकै रो इन् । १३ वर्षको छोरो र १४ महिनाकि सानी छोरी छो डेर श्रीमानचाहिँ जेठी छोरी लिएर फ रार हुँदा आफ्नो छाती निकै पोल्ने उनले बताइन् ।छोरी निकै बि ग्रीएकी र श्रीमानले उनलाई फोन गरी फकाएर फ रार रहेको उनले बताइन् । फ रार भएका श्रीमान जेठी छोरीसंग अहिले झापा आएका छन् र श्रीमतीले जेठी छोरीको माया नगरेको सधैं हेला गर्ने गरेको भएर छोरी लिएर आफू हिडेको उनले बताए ।आफू विदेशबाट बि रामी भएर आएको र पैसा नभएको हु
भिडियो हेर्न तल थिच्नुस, बलिउडका चर्चित कलाकार सिद्धार्थ शुक्लाको दुई दिन अगावै मृ त्यु भएको थियो। ४० वर्षका सिद्धार्थको हृ'दय घातले मृ' त्यु भएको भनिएको थियो तर अनु सन्धानका क्रममा सिद्धार्थको कारको बछाडीको सिसा फुटेको पाइएको थियो। यसले उनको कसैसंग झ' गडा भएको हुन सक्ने आशं'का पनि गरिएको थियो ।अथवा गाडीको दुर्घ टना भएको हुन सक्ने शं'का पनि पैदा गरेको थियो ।तर अहिलेसम्म दुर्घ ट'ना बारे केही खबर हामीले पाएका छैनौं । विभिन्न श्रोतका अनुसार सिद्धार्थले राती सुत्ने बेलामा केही दबाई समेत सेवन गरेको पाइएको छ।मुम्बईको कुपर हस्पिटलमा उपचार भइरहेको उनको कुपर हस्पिटलमै मृ' त्यु भएको हो ।धेरै हिन्दी सिरियलमा काम गरेका सिद्धार्थ बलिउडका चर्चित अभिनेता थिए। मृ' त्युपछि पो'स्ट मार्टम गर्न श 'व पुलिसले लगेको थियो भने उनीसंग नजिक भएकासंग सोधपुछ पनि गरियो।सिद्धार्थ चर्चित टिभी कार्यक्रम बिग